China Portable Ultrasonic transducer Impedance analyzer Fandrefesana fitaovana ho an'ny fanamboarana ny paramères sy ny orinasa | Qianrong
Portable Ultrasonic transducer Impedance analyzer Fandrefesana fitaovana ho an'ny Parameter
Portable, efijery 8 inch, efijery mikasika feno
Ny masontsivana rehetra, ny kisary
Famaritana azo refesina
5s / pass iray （600teboka scan）
Temperature amin'ny tontolo iainana
Ultrasonic mpiorina lozisialy QR520A andian-vokatra ho an'ny karazana fitaovana ultrasonic isan-karazany amin'ny fandrefesana zavatra, ao anatin'izany ny ceramika piezoelectric, transducers, milina fanadiovana ultrasonic, milina fantson-plastika ultrasonika, acoustique ambanin'ny rano, fitaovana magnetostrictive, grinder ultrasonic, atomisation ultrasonic, fanadiovana ultrasonika, radara miverimberina, ultrasonic ranging, phacoemulsification, ultrasonic cleaning, ultrasonic motors, ary ny fampiasana piezoelektrika sy fitaovana ultrasonic ary fitaovana rehetra.
1. efijery lehibe, mikasika ny efijery feno, manao ny traikefa iasan'ny QR70A-P (kinova amin'ny solosaina) QR520A, ary tsy misy korontana amin'ny fahatsapana fiasan'ny solosaina.
2. Miantehitra amin'ny fahaiza-manao fikirakirana angona fikirakirana ARM vaovao, QR520A fandrefesana ny refy dia avo lavitra noho QR70A-D (miaraka amin'ny kinova fampirantiana), afaka hahatratra ny haavon'ny QR70A-P (solosaina).
3. Ny fiasan'ny efijery feno dia mora kokoa amin'ny mpampiasa, tsy mila QR70A-D (kinova fampiratiana manokana) bokotra ara-batana marobe, noho izany dia lasa tsotra be ny fitaovana fandidiana, ny haben'ny famokarana dia kely kokoa, maivana ary mora entina kokoa.
4. Mampifandray ny solosaina hiasa ho QR70V-P. Mifanaraka tanteraka ilay rindrambaiko, tsy mahazatra ny mpampiasa intsony ny fampiasana lozisialy.
1. Ny Oniversite Tsinghua sy ny Akademia Shinoa momba ny siansa momba ny akustika dia niara-namorona teknolojia.
2. Hatramin'ny 2001, ny andiam-bokatra QR60A / 70A any an-tsena dia 15 taona, mpanjifa an'arivony maro no ampiasaina amin'ny indostria, dia lasa zava-misy marina ny fenitra fandrefesana indostrian'ny ultrasound.
3. Nandritra izay 15 taona lasa izay dia oniversite maherin'ny 200 no nampiasa ny fitaovantsika, satria matetika izy ireo dia manana maherin'ny 20 000 fitaovana Agilent nafarana, 4294A. Ny fitaovantsika dia nosedraina imbetsaka tamin'ny zavamaneno Agilent nafarana. Hita fa azo itokisana tanteraka ny valin'ny fitaovantsika.
4. Ny fitaovantsika dia nampiasain'ny orinasa alemanina sy amerikanina fanandramana ultrasonika maro ho fitaovana fitsapana. Ny fitaovana dia lakilen'ny fanaraha-maso kalitao. Raha mifidy zavamaneno vita sinoa isika. Tokony hametraka azy ireo amin'ny fototry ny fahatokiana tanteraka isika.
Previous: 40Khz Ultrasonic Nano Spray Device miaraka amina fanonerana matetika matetika
Manaraka: 20Khz tandindona fanamafisam-peo namboarina tamin'ny alàlan'ny fitsaboana anodizing
3000W Hot-nandrendrika famehezana famehezana ny plastika farany C ...
60Khz 150W Ultrasonic Welding Transducer ho an'ny Co ...
40Khz Fitaovana fanapahana hazavana ultrasound azo entina ...